Sahel ahụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ekele maka okpomoku nke Mediterranean | Netwọk Mgbasa Ozi
Sahel ahụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ekele maka mmiri na-ekpo ọkụ na Mediterranean
Etwa mbara ala bu uwa di ndu, nke mere na mgbe okpomoku di otu ebe, ha dara na ozo iji dobe onodu oku nke uwa. Ihe yiri ya ga-eme na Mediterranean na Sahel: n'ime afọ 20 gara aga, mpaghara Mediterenian na-enwewanye mmụba na okpomọkụ na mbelata mmiri ozuzo, mmiri ozuzo nke yiri ka ọ kwaga Sahel, dị ka ekpughere na nnyocha e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Nature Climate Change, nke Max Planck Institute for Meteorology kwadebere.
N'ihi mmụba nke okpomọkụ na Mare Nostrum, iru mmiri nke rutere na mpaghara ndịda Sahara na mmalite nke udu mmiri West Africa na June dịkwa elu, yabụ Sahel na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ihu igwe na Sahel na-agbanwe nke ukwuu, nke mmiri ozuzo Ọdịda Anyanwụ Africa na-achịkwa, nke na-eweta mmiri ozuzo site na June ruo Septemba. N’afọ ọzọ, a na-enwe oké ọkọchị. Hewa na-ekpo ọkụ karịa oke osimiri n'oge ọkọchị, ebe ọ bụ na anyanwụ dị n'ọnọdụ ka elu, na mgbakwunye, oke osimiri anaghị amịkọ ọkụ ọkụ dịka ụwa. Ikuku na esite na ala wee bulie ya elu ma mee nkea na enye mmiri mmiri site n’oké osimiri wee banye na Sahel.
Ike nke udu mmiri na-agbanwe n'oge ụfọdụ. N’agbata afọ 1950 na 1960, Sahel nwere oge iru mmiri; Wɔ 1980 mfe no mu no, nnipa bɛboro 100.000 na wɔbaa Nkaedi no ase. Kemgbe ahụ, mmiri ozuzo laghachiri.
Ihe kpatara ya dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo bụ Okpomoku di Mediterranean. Iji mezuo nkwubi okwu ahụ, a mụrụ ihe dị iche iche site na iji ntụgharị dị iche iche. N'ihi ya, ha chọpụtara na ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na mpaghara Mediterenian na-adịgide ma ọ bụ na-adịghị agbanwe agbanwe, oke mmiri ozuzo na Sahel anaghị arị elu; na ntụzịaka, ọ bụrụ na Mediterenian dị ọkụ, na Sahel ọ na-ezo mmiri karịa.
Nke a bụ n'ihi na ọbụghị sọọsọ ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu, kamakwa iru mmiri, nke bụ ihe "na - eme ka" mmiri udu mmiri nke ọdịda anyanwụ Africa. N’ụzọ dị otu a, n’akụkụ a nke Africa, ha nwere ike ịnụ ụtọ mmiri ozuzo ọzọ na mbido oge udu mmiri.
I nwere ike ịgụ ihe ọmụmụ ahụ ebe a (na Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Sahel ahụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ekele maka mmiri na-ekpo ọkụ na Mediterranean
6 ịmata ihe banyere ajọ ifufe nke ga-eju gị anya
Oke ohia nke nwere ike nweta ihe ngwọta iji gbochie mgbanwe ihu igwe